Askari dharka dadka ku dhici jirey dharka CIIDAMADA oo la xukumay! (Faahfaahin) | Hadalsame Media
Home Wararka Askari dharka dadka ku dhici jirey dharka CIIDAMADA oo la xukumay! (Faahfaahin)
Askari dharka dadka ku dhici jirey dharka CIIDAMADA oo la xukumay! (Faahfaahin)
(Muqdisho) 06 Maajo 2019 – Dable Axmed Maxamed Xuseen oo katirsan Ciidamada Amniga gaar ahaan Boliska ayaa siyaaba kala duwan dhac ugu geystay dad rayid ah oo uu u galay waddada xilliya kala duwan qeyba kamid ah degmada Kaaraan gaar ahaan Xaafadda Jamhuuriya.
10-kii Maarso 2019, ayay Ciidamada amnigu kasoo qabteen Xaafadda Jamhuuriye xilligaasi oo uu gacmaha kula jiray dhac uu u geysanayay qaar kamid ah bulshada ku dhaqan xaafadaasi.
7 qof oo dhibane u ah ayaa iska diiwaan geliyay galka cabashada Ciidamada Amniga ee degmada Kaaraan kuwaasi oo ka cabanayay dhac uu u geystay Dable Boliis Axmed Maxamed Xuseen.
Xafiiska xeer ilaalinta ayaa horkeenay Maxkamadda ilaa 7 dhibbane oo dhammaan dacwad ka ah eedeysanaha oo siyaaba kala duwan uga qaatay teleefanadooda isaga oo ku labisan dareeska ciidamada amaniga, waxa ay sidoo kale horkeeneen Maxkamadda qorigii uu dhacca ku geysan jiray eedeysanaha iyo Qiraalkiisa.
Previous articleSomalia oo hal arrin ku noqotay dalka ugu SOOMID sahlan (Arag sababta & dalal aan laga soomanayn)
Next articleDAAWO: Sidii kubad ayay dhulka ugu dhacday kaddibna kor ayay u booddey (Muuqaal SIR ah oo laga helay dayuuraddii holacdey)